Elifas asɛm a edi kan no ntoaso (1-27)
‘Afiri a anyansafo de wɔn anitew asum no, Onyankopɔn ma eyi wɔn ankasa’ (13)
‘Ɛsɛ sɛ Hiob hwɛ na wampo Onyankopɔn nteɛso’ (17)
5 “Wopɛ a frɛ hwɛ sɛ obi begye wo so a! Akronkronfo no mu hena na wobɛkɔ ne nkyɛn sɛ ɔmmoa wo? 2 Ahisɛm na ebekum ɔkwasea,Na anibere na ebekum ogyimifo. 3 Mahu ɔkwasea a n’ase retim,Nanso prɛko pɛ, wɔdomee ne tenabea. 4 Ne mma nni ahobammɔ biara;Wɔbɛpɛtɛw wɔn wɔ kurow apon ano,+ na wɔrennya ogyefo biara. 5 Nnɔbae a otwa no,* onipa a ɔkɔm de no na obedi;Ɔbɛfa nea ɛwɔ nsɔe mu mpo aka ho,Anitefo bɛmene wɔn agyapade.* 6 Efisɛ mmusu mfifi wɔ mfuturu mu,Na ɔhaw mfifi mfi fam. 7 Na sɛnea ogya a ɛredɛw tutu a, ɛkɔ soro no,Saa ara na onipa nso, sɛnea ɛte biara, ɔhaw bɛto no. 8 Nanso sɛ ɛyɛ me a, anka mɛsrɛ Onyankopɔn,Anka mede m’asɛm bɛma Onyankopɔn, 9 Anka mede bɛma Nea ɔyɛ nneɛma akɛseakɛse ne nneɛma a ɛboro yɛn ntease so,Nea ɔyɛ anwonwade bebree no. 10 Ɔma osu tɔ gu asaase so,Na ɔma osu tɔ gu mfuw so. 11 Ɔma mmɔborɔwa so,Na ɔpagyaw nea wabotow ma onya nkwagye. 12 Ɔsɛe anitefo pɔw a wɔabɔ,Sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn nsa ano adwuma renyɛ yiye. 13 Afiri a anyansafo de wɔn anitew asum no, ɔma eyi wɔn ankasa,+Sɛnea ɛbɛyɛ a anitefo pɔw a wɔabɔ bɛsɛe. 14 Esum to wɔn awia,Na awia ketee, wɔde wɔn ti pempem te sɛ nea ade asa. 15 Ogye onipa fi anitefo anom sekan ano,Na ogye ohiani fi ɔhoɔdenfo nsam, 16 Sɛnea ɛbɛyɛ a mmɔborɔwafo benya anidaso,Na amumɔyɛfo aka wɔn ano atom. 17 Hwɛ! Anigye ne onipa a Onyankopɔn kasa kyerɛ no,Enti hwɛ na woampo ade nyinaa so Tumfo no nteɛso! 18 Efisɛ opira nnipa, nanso ɔkyekye kuru no;Obubu nnipa, na ɔde ɔno ara ne nsa sa wɔn yare. 19 Obegye wo afi amanehunu asia mu,Na nea ɛto so ason mpo renyɛ wo hwee. 20 Ɔkɔm ba a, obegye wo afi owu nsam,Na ɔko ba nso a, obegye wo afi sekan nsam. 21 Ɔbɛbɔ wo ho ban afi tɛkrɛma a ano yɛ yaw te sɛ abaa ho,+Na sɛ ɔsɛe ba a, worensuro. 22 Wobɛserew ɔsɛe ne ɔkɔm,Na worensuro asaase so mmoa a wɔn ho yɛ hu. 23 Efisɛ wuram abo renyɛ wo bɔne,*Na wuram mmoa a wɔn ho yɛ hu ne wo bɛtena asomdwoe mu. 24 Wubehu sɛ wo ntamadan si hɔ dwoodwoo;*Wobɛkɔ akɔhwɛ wo mmoa adidibea, na wubehu sɛ biribiara nyerae. 25 Wo mma bɛdɔɔso,Na w’asefo bɛyɛ bebree sɛ asaase so wura. 26 Bere a wobɛkɔ ɔdamoa mu mpo, na wowɔ ahoɔden,Te sɛ hwiit* a wɔakyekyere asisi hɔ atifi atifi wɔ ne bere mu. 27 Hwɛ! Yɛahwehwɛ asɛm yi mu, na yɛahu sɛ ɛyɛ nokware. Tie na gye tom.”
^ Anaa “Nnɔbae a ɔkwasea no twa no.”
^ Anaa “Afiri beyi wɔn agyapade.”
^ Anaa “wuram abo ne wo bɛyɛ apam.”
^ Nt., “wɔ asomdwoe.”